Lukashenko, LTD | ဘယ်လာရုစ်ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံခြားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ 6-တစ်နှစ်တာထောင်ချဖော်ပြထားသည်
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / Lukashenko, LTD | ဘယ်လာရုစ်ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံခြားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ 6-တစ်နှစ်တာထောင်ချဖော်ပြထားသည်
27/11/2013 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ငါမသိ, ဘယ်မှာစတင်ရန်. အစကတည်းကမှ,? ဤမျှလောက်များစွာသောအတှေး, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီငါ start အဖြစ်, သူတို့ကချက်ချင်းပြေး, ကြောက်ငါးစုကဲ့သို့. ငါဘွားသောနေ့ရက်ကနေညာဘက်ကိုစတင်ချင်ပါတယ်. သို့သော်ထိုသို့ငြီးငွေ့စရာင် – retell, လူတိုင်း၏ဘဝကိုလုံးဝနီးပါးတူညီဖြစ်ပါသည်, ဆိုဗီယက်မှာမွေးဖွား. ထိုအခါအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးနိုင်, အသက်တာ၏လူ့စံချိန်စံညွှန်းများကအလွန်မကြာမီအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဟု, အများအပြားပြောင်းလဲမှုများ, ယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်ခဲယဉ်းရဲ့, ဒါပေမယ့်ပင်လှညျ့အိပ်မက်ကိုတွေ့မြင်. ပင်သည်ဤသဘောတရားများကိုသဘောသဘာဝအတွက်မဟုတ်ကြသောကြောင့်, ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း, လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့်အခြားပြီးတော့အများကြီးပို. ပင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို “spekulyant” သို့မဟုတ် “torgaş” တစ်ဦးတိုးတိုးလေးကိုပြုတတ်ကြ၏, ကြောက်လန့်ကူးစက်ခံရဖို့ပါလျှင်အဖြစ်. ငါသတိရ, တစ်ခါတုန်းကလူတစ်ဦးဆိုင်၌ငါ၏မိခင်ပြသ, တူညီတဲ့အပေါငျးတို့သကြည့်ရှုရန်, သူတိုးတိုးလေးပြောပါတယ်: “သူဟာသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပါသည်, သူကပင်နိုင်ငံပိုင်ငွေကို ယူ., အလုပျသမား '' လုပ်အားခပေးချေရန်”. ထိုအခါငါဘာမှနားမလည်ကြဘူး, ဒါဟာခဲ့ 1978 ခုနှစ်.
အခန်းထဲမှာမှိန်ခဲ့. အနိုင်နိုင်အရာဝတ္ထု၏မြင်နိုင်ခကျြအောထောက်ပြ, ကဉျြးထောငျကလာပ်စည်းခဲ့ကြောင်း. shkonarey ၏တဦးတည်းတွင်ကျွန်မထိုင်လျက်. လာမယ့်, ကြှနျတေျာ့ပခုံးပေါ်မှာမိမိခေါင်းကိုနှင့်အတူ, တိတ်တဆိတ်ကြှနျုပျ၏မယားငို. ငါခံစားခဲ့ရ, သူမ၏နွေးထွေးသောမျက်ရည်ငါ့အရှပ်အင်္ကျီပေါ်မှာလှဲအဖြစ်. သူမသည်မိမိလက်နှင့်မျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်း. သူမသည်အမြဲ ပြု. ,, သူမကအထူးသဖြင့်စိတ်ထိခိုက်သောအခါ. အသံမရှိခဲ့သည်. ရုတ်တရက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအကျွမ်းတဝင်စကားသံကိုရှိခဲ့သည်: “ဂွတ်ဘိုင်!”. ငါ shuddered. အခန်း၏နက်နဲသောပင်လယ်၌အခြားသောမိန်းမ, ကိုယ့်ကိုသတိထားမိကြဘူး. ဒါဟာငါ့အမိဖြစ်. နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးတွေသားမွေးအင်္ကျီရှိကြ၏. ငါပေါ့ပေါ့ဆစ်ခဲ့တယ်. တဦးတည်းရှပ်အင်္ကျီနှင့်အားကစားဘောင်းဘီထဲမှာ. သူ့ခြေရင်းတွင်ပလပ်စတစ်ဖိနပ်ခဲ့ကြသည်, ဤအကဉျြးထောငျ၌ရှိကြ၏, သူတို့ကိုငါမုန်း. “ထူးဆန်း, သူတို့ပူမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို”, ငါအမျိုးသမီးတွေစဉ်းစား. သို့သော်ထိုသို့မျှသာကြောက်မက်ဘွယ်သောသတိပေးချက်ပယ်ဖုိ့ရန်ကြိုးပမ်းမှုခဲ့သည်.
Bing မှ, ငါ့အိပ်မက်သို့ချိုးဖဲ့, ငါအဖြစ်မှန်နဲ့တူပေါ်ထွက်လာ. ဒါဟာအကျဉ်းထောင်ခေါ်ဆိုခခဲ့သည်. အဆိုပါ6ထောင်ထဲ Gomel မြင့်တက်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကို. ပထမဦးဆုံးစက္ကန့်အနည်းငယ်, ငါကကျော်မရနိုင်ခြင်း. စိတ်ထင် “ဘယ်မှာငါဖြစ်၏?” ငါ့ကိုယ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဆဲလ်အပေါ်ခေါက်နေပါတယ်. ထိုးပြီးဦးထုပ်နှင့်အတူဦးခေါင်းဆွဲ, ငါနာကျင်စွာသတိထားမိဖြစ်လာခဲ့သည်, ဘယ်မှာငါဖြစ်၏နှင့်မည်သို့ငါကဒီမှာလေ. အနည်းငယ်လျော့နည်းသည်ထက်နှစ်ဆယ်စတုရန်းမီတာကင်မရာအရွယ်အစား. မျက်နှာကျက်ကျဉ်းမြောင်းသောကွာဟမှုလက်အောက်တွင်, နှင့်ပြတင်းပေါက်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်သော, embedded ဘား, သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကပိုပြီးနှင့်သံ strips တွေ. ပြတင်းပေါက်ဟုခေါ်တွင်သူမြို့သား “reshkoy”, နှင့် strips တွေ “Resnick”. အခနျးထဲမှာဉျြးကဉျြးကုတင်သုံးခုတန်းစီမတ်တပ်ရပ်, သံချောင်းတွေ၏ welded, ကဖြစ် “škonari”. ထောင့်များတွင်အထပ်များတွင်အပေါက်တစ်ပေါက်၏ပုပ်စပ်သောအနံ့ကိုပေး၏, သူမ၏သေးငယ်တဲ့ partition ကိုကွဲကွာအဓိကအခန်းတစ်ခန်းထဲကနေ. သူမသည်သာဒူးမှာလည်းမရှိသောသူသည်ဖုံးလွှမ်း. ဒါကြောင့်ဤအရပ်ဌာနကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု (ငါမျှော်လင့်ပါတယ်, သငျသညျကိုနားလညျ, ဒါကြောင့်အိမ်သာခဲ့သည်, ဒေသခံစကား "dyuchka" တွင်) ဒါဟာပြဇာတ်စွမ်းဆောင်ရည်သို့လှည့်, ကြှနျတေျာ့ခွေးငါ့ကိုသတိပေး, အရာ, ငါကမသူ့ကိုကြည့်သည့်အခါ, ငါအရူးမိန်းမောတွေဝေမျက်နှာပြုပါ, လက်၌ရယ်စရာ Place နားရွက်. ငါထင်, ကြောင်းမကြာမီစိမ်းဖြင့်, ငါငါးဆယ်လူမျိုး၏ရှေ့တော်၌သွားထက်. ထို, ထို, ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောနံပါတ်များ၌ဤအခနျးသို့ပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်. ကိုယ်ကသာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်မသင်ယူခဲ့သည်, အခြေခံပျော်စရာအဆိုပါ Gomel သောကြာနေ့ကလူတဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ် KGBshniki ကြောင်း, သူကဒါခေါ်စုဆောင်းခြင်းအခန်းသုံးစွဲပထမဦးဆုံးရက်, ဘယ်မှာအပေါငျးတို့သ stuffing, တနင်္ဂနွေမတိုင်မီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူ, အကျဉ်းထောင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တနင်္ဂနွေရိုသေများနှင့်လူမျိုး၏ဆဲလ်ထဲမှာကတည်းကဖြန့်ဝေခြင်းမရှိပါ. ထို, ကောင်းစွာပြန်. အမှုအရာ fit ကိုဘယ်လိုဖော်ပြရန်ခက်ခဲဒါဟာင်, လူတွေအလှည့်အားဖြင့်ကြွင်းသောအရာမှဆင်းရပ်နေနှင့်ထိုင်ကြစဉ်. အဆိုပါပရိသတ်ကိုမတူညီတဲ့ခဲ့သည်, အိုးအိမ်မဲ့နှင့်ဝတ်စုံအတွက်အသိဉာဏ်-ရှာဖွေနေယောက်ျားနှင့်အတူအဆုံးသတ်အနေဖြင့်, ငါကဲ့သို့သော. ငါအိပ်ပျော်ခြင်းနိုင်ခဲ့သည်. ယင်းမှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင့်အမြင်အမှတ်, ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမှားအဖွဲ့အစည်းကိုဖန်ဆင်း, နှင့်လေးနက်သော-ရှာဖွေနေတယောက်သောသူနည်းနည်းအခိုင်အမာ, ဒါကြောင့်ကျွန်မမောအိပ်ကိုယူ, ဒုတိယဆင့်ပေါ်မှာငါ့ကို shkonar လွတ်မြောက်စေဖို့. ကြှနျုပျတို့သညျ "တင်" သောအခါ (နောက်ထပ်စကားရပ်ကိုရှာဖွေခဲယဉ်းသည်) ကင်မရာ, ပြီးသားရှိခဲ့သည်သူကလူတဦးတက်ခုန်ခြင်းနှင့်အော်,: "ယောက်ျားများ, ဂရုတစိုက်! အဲဒီမှာလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်!». စိတ်ကူးရန်ခက်ခဲသည်, ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ခွဲ, နှင့်အရပ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်. ငါတို့စပ်ကြားနှစ်ဆယ်ငါး၏လူယောက်ျားကြီး, သူ၏ခေါင်းကိုချ, ကောက် usmehalsya, ပို. ပင်ဒါကြောင့် Hunt တိရစ္ဆာန်တစ် grimace ခဲ့သည်. "ကြေမွ" သို့မဟုတ် "fag" – အကျဉ်းထောင်အတွင်းနိမ့်ဆုံးဇာတ်. စိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်း, ဤလူမှတဆင့်သွားကြသည်, အဆင့်တွားသွားလျှော့ချသော, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကသူတို့ဆောင်များတွင်ရချင်ခဲ့တယ်. တဖန်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူရှိရနိုင်. အဆိုပါအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအောက်မှာကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ထောက်ခံ၏အုပ်ချုပ်ရေး, ထို့နောက်ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှာ, ဖိအားပေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူ. ဒါပေမယ့်ပိုပြီးကြောင်းပေါ်နောက်ပိုင်းတွင်. ဤလူ, "တွဲ", ယင်းညစ်ပတ်အလုပ်ကို, သန့်ရှင်းသော, အိမ်သာကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်ပင်သောသူတို့သည်အဓမ္မပြုကျင့်, "သူခိုးတွေ" - သူတို့ကိုယ်သူတို့ထောင်ထဲမှာအတွက်သီးသန့်အိမ်ခြံမြေထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့သူ, "ပြူးကြည့်", "authoritative ယောက်ျားလေးများ". ဒါဟာအရေးမပါဘူး, ဘယ်လိုသူတို့ style အမျိုးမျိုး, အမှတ်, သူတို့လက်နက်လည်း, အရာအကျဉ်းသားအပေါ်ဖိအားပေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, မဟုတျဘဲအစဉ်အမြဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါကြောင့်လည်းထွက်အုပ်ချုပ်သည်မဟုတ်ပေမယ့်, တခါတရံပင်အုပ်ချုပ်ရေးအားပေးတိုက်တွန်း. , အကျဉ်းထောင်သဘောတရားများနှင့်အဆက်အသွယ်ထဲသို့ "လျှော့ချ" သင်မပေးသင့်ပါတယ်အတူ join ဖို့အဓိကကဆက်ပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာဝေယူဖို့မအဖြစ်. ထို့ကြောင့်, ငါကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုနားလည်, အရာလူတိုင်းကိုအနီးကပ်အခန်းထဲက uzhatsya လုပ်, ဘုရားသခငျသညျထိုဆင်းရဲသောမထိဖို့မြစ်တား.
တံခါးကိုအနည်းငယ် window ကိုဖွင့်လှစ်, ဒါခေါ် "လမ်းခွဲ", သူအစားအသောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စတင်ခဲ့သည်. "Kaslo", ʙalanda '' – ဒေသခံဘန်းစကားမှာဤအဒါခေါ်ထောင်ထဲမှာအစားအသောက်. သင်တန်း, မပုံမှန်လူတစ်ဦး, နှင့်မှတပါးငါဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာမှထိုကဲ့သို့သောထိတ်လန့်ခဲ့သူကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့, ကြောင်းခဲကိုစားနိုင်ခြင်း. rumpled နည်းနည်းယောက်ျား၏အခြို့သောကြင်နာ, မျက်စိ၌ငါ့ကိုရှာနေ ingratiating, ငါမေးသော်, ဖြစ်စေ
ထောင်ထဲမှာသူနွေဦးနံနက်စတင်ခဲ့သည် 2005 ခုနှစ်. ထိုအခါငါမသိခဲ့ပါ, ထိုအပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု 2191.
မစ္စတာ. သူ Mykhailenko အတွက်ကိုယ်စားပြုမှုအားဖြင့်သယ်ဆောင် & Kirtley, တစ်ဦးပဲရစ်မြို့အခြေစိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိ Boutique, နှင့်အငြင်းပွားမှုသူ၏အသိပေးစာကိုအောက်ပါလိပ်စာသို့မှာတွေ့နိုင်ပါသည်: https://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1607.pdf
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, သြစတြီးယားအနုညာတစီရင်, ဘယ်လာရုစ်အနုညာတစီရင်, ဘယ်လ်ဂျီယံအနုညာတစီရင်, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, အိုက်စလန်အနုညာတစီရင်, Mauritania အနုညာတစီရင်, ပဲရစ်အနုညာတစီရင်